Isaziso soMthetho | Iwuhan Golden Laser Co., Ltd.
Plate Metal kunye Tube Tube laser Ukusika
Robotic Arm 3D Laser Ukusika kunye Umatshini Welding
Oomatshini bokucoca oBuzenzekelayo boMatshini oSusa i-Laser P- (A) Uthotho
Umatshini osikiweyo ogqityiweyo we-Laser Files kunye nePallet yokuTshintsha iTafile ye-GF-JH
Vula Uhlobo lweFiber Laser yokusika Umatshini GF Uthotho
Umsebenzi oMbini weFayile yeLaser sheet kunye noMatshini wokusika ityhubhu ye-GF-T
Umatshini wokuShunqisa oMphezulu weFreyimu yeLaser yeLaser-GF-6060
Le webhusayithi ilawulwa, ilawulwa kwaye igcinwe yiWUHAN GOLDEN LASER CO., LTD. (Inkxaso encinci: Vtop Fibre Laser) (abbr. GOLDEN LASER (Vtop Fibre Laser). Uyacelwa ukuba ufunde le mibandela yokusebenzisa ngaphambi kokuba uyisebenzise. Unokwazi ukujonga le webhusayithi phantsi kwemeko yokwamkela le mibandela.
Yonke imixholo kule webhusayithi yenzelwe wena buqu ngenjongo yokuthengisa. Nasiphi na isipapasho kunye nesibhengezo esivela kunxibelelwano kufuneka sihlonitshwe nguwe. Awuvunyelwe ukuba uhlele, ukope kwaye upapashe, ubonise ezi ziqulatho zentengiso. Ukuziphatha okulandelayo kufuneka kungavunyelwa: ukubeka lo mxholo wewebhu kwamanye ama-webs kunye namaqonga eendaba; Ukusetyenziswa okungagunyaziswanga kukwaphula umthetho welungelo lokushicilela, uphawu kunye neminye imida esemthethweni. Kungangcono uyeke zonke izinto ukuba akuvumelani nale mithetho ingentla.
Olu lwazi lwewebhusayithi lukhona ngenjongo yokusetyenziswa okukhethekileyo kwaye aluqinisekiswanga nangayiphi na indlela. Asinakuqiniseka ngokuchanekileyo nangokugqibeleleyo umxholo wayo ophantsi kokutshintsha ngaphandle kwesaziso. Ukwazi ngakumbi malunga nemveliso yethu, isoftware kunye nokungeniswa kwenkonzo, unganxibelelana nommeli okanye iarhente echongwe ngu-GOLDEN LASER (Vtop Fibre Laser) kwindawo yakho.
Naluphi na ulwazi olungenisayo okanye i-imeyile kuthi kule webhusayithi aluthathwa njengolungemfihlo kwaye alunalungelo elikhethekileyo. I-GOLDEN LASER (i-Vtop Fiber Laser) ayizukubopheleleka kolu lwazi. Ukuba ngaphandle kwesibhengezo kwangaphambili, uya kusilela ekuvumeleni ezi ngxelo zilandelayo: GOLDEN LASER (Vtop Fiber Laser) kunye negunya lakhe eligunyazisiweyo banelungelo lokusebenzisa ulwazi lomthengi, olunje ngedatha, umfanekiso, isicatshulwa kunye nelizwi ngokukopa, kunye ukuveza, ukupapasha njalo njalo. Asinaxanduva lakuphi ukhubekisa, ukungcolisa, okanye ukuthuka okucekisekayo okwenziwe kwiibhodi zemiyalezo okanye ezinye izinto eziSebenzayo zeSayithi. Sinelungelo ngalo lonke ixesha ukubhengeza naluphi na ulwazi esikholelwa ukuba kufanelekile ukwanelisa nawuphi na umthetho, umgaqo, okanye isicelo sikarhulumente, okanye ukwala ukuthumela okanye ukususa naluphi na ulwazi okanye izixhobo, ngokupheleleyo okanye ngokuyinxalenye, ngokokubona kwethu ayifanelekanga, iyachasa okanye iyaphula le Migaqo yeNkonzo.
Siya kuba nelungelo, kodwa kungekho sinyanzelo, sokujonga umxholo webhodi zemiyalezo okanye ezinye izinto ezisebenzayo ukumisela ukuthotyelwa kwesi sivumelwano kunye neminye imithetho yokusebenza esiyihambisayo. Siya kuba nelungelo ngokokubona kwethu ukuhlela, ukwala ukuthumela, okanye ukususa nayiphi na impahla engeniswe okanye iposwe kwiibhodi zemiyalezo okanye kwezinye izinto ezisebenzayo zesiza. Ngaphandle kweli lungelo, umsebenzisi uyakuhlala enoxanduva lomxholo wemiyalezo yawo.
Uyacelwa ukuba uhambisane nemvumelwano xa usikhuphele isoftware kule webhusayithi. Awuvunyelwe ukuba uzikhuphele ngaphambi kokuba wamkele yonke imiqathango kunye neemeko.
IiSayithi zeSigaba seSithathu
Amacandelo athile eSiza anokubonelela ngekhonkco kwiindawo zesithathu, apho unokukwazi ukuthenga kwi-Intanethi iintlobo ezininzi zeemveliso kunye neenkonzo ezibonelelwa ngabantu besithathu. Asinaxanduva lomgangatho, ukuchaneka, ukugcina ixesha, ukuthembeka, okanye nayiphi na enye into kuyo nayiphi na imveliso okanye inkonzo enikezwe okanye ebonelelwe ngumntu wesithathu. Yonke imingcipheko eveliswa kukusebenzisa isiza somntu wesithathu kufuneka ithwalwe nguwe.
Uyavuma ukuba thina okanye abo sinxibelelana nabo okanye ababoneleli beesayithi besithathu abanoxanduva lwawo nawuphi na umonakalo owenzileyo, kwaye awuyi kuqinisekisa amabango ngokuchasene nathi okanye kubo, avela ekuthengweni nasekusetyenzisweni kwayo nayiphi na imveliso okanye iinkonzo kwindawo yethu.
Abasebenzisi bamanye amazwe
Indawo yethu yewebhu iqhutywa liCandelo loKhuthazo lweMveliso yeGOLDEN LASER (Vtop Fibre Laser). I-GOLDEN LASER (Vtop Fibre Laser) ayiqinisekisi ukuba umxholo wale ndawo uyasebenza nakubantu abangaphandle kwe China. Akufuneki usebenzise indawo okanye uthumele ifayile ngokungathobeli umthetho wokuThumela ngaphandle kwiChine. Ubotshelelwe ngumthetho wasekhaya xa ubhenela kule ndawo. Le migaqo kunye neemeko zilawulwa yimithetho yaseTshayina elawula iJurisdiction.
Sinokuthi, nangaliphi na ixesha kwaye ngaphandle kokuqaphela, sinqumamise, singarhoxisi, okanye sinqumamise ilungelo lakho lokusebenzisa indawo. Kwimeko yokumiswa, ukucinywa, okanye ukupheliswa, awusagunyaziswanga ukuba ufikelele kwinxalenye yeSiza. Kwimeko apho kukho ukunqunyanyiswa, ukurhoxiswa, okanye ukuyekiswa, izithintelo ezibekiweyo kuwe ngokubhekisele kwizinto ezikhutshelweyo kwisiza, kwaye izibhengezo kunye nokusikelwa umda kwetyala elibekiweyo kule Migaqo yenkonzo, liya kusinda.
IGOLDEN LASER (Vtop Fibre Laser) luphawu lwentengiso yeWUHAN GOLDEN LASER CO., LTD. Amagama emveliso ye-GOLDEN LASER (Vtop Fibre Laser) nawo athathelwa ingqalelo njengophawu lokuthengisa okanye uphawu olusebenzisa uphawu. Amagama eMveliso kunye neenkampani ezichaziweyo kule ndawo zizezabo. Awuvunyelwe ukusebenzisa la magama. Impikiswano yenzeka ngexesha lokusebenzisa le ndawo iya kusonjululwa ngothethathethwano. Ukuba azikasonjululwa, iya kungeniswa kwinkundla yabantu eWuhan phantsi komthetho iPublic of China's Republic of China. Ukucaciswa kwesi sibhengezo kunye nokusetyenziswa kwale ndawo yewebhu kuchazwe kwi-WUHAN GOLDEN LASER CO., LTD.